Popular Myanmar (www.popularmyanmar.com) | ဂန္တ၀င်
Home Myanmar Websites Myanmar Crime News Popular Myanmar (www.popularmyanmar.com)
Popular Myanmar (www.popularmyanmar.com)
Popular Myanmar ဆိုဒ်ဝင်ရောက်ရန် မြန်နှုန်းသည် ၁၀- ၁၅ စက္ကန့်ခန့်ကြာသည်။ ဆိုဒ်ခေါင်းကြီးပိုင်းကို မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာများကဲ့သို့ အကြီးဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ Popular Myanmar သည် ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီကိုသိသာထင်ရှားသောအရောင်များဖြင့် ခွဲခြားဖော်ပြထားသည်။ Popular Myanmar သည် သတင်းတစ်ခုစီကိုဖော်ပြထားရင်း၎င်းနှင့်ဆက်စပ် သတင်းများကိုလည်းပူးတွဲဖော်ပြပေးသည်။အွန်လိုင်း Voting စနစ်နဲ့ ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးပေါ့ပ်သီချင်းဆုရှင် လွှမ်းရတီဇော်၊ ဈေးဆစ်ခြင်းသည်းခံပါ ဇာတ်ကားကိုဟိန်းဝေယံနဲ့ ရိုက်ကူးနေတဲ့ အိချောပို၊ အွန်လိုင်းဟာအသုံးချတတ်ရင် အကျိုးရှိနိုင်သလိုအသုံးမချတတ်ရင် ဘေးတွေ့နိုင်ကြောင်းတရားလွှတ်တော် ရှေ့နေဦးအောင်စိုးဦးပြောကြားစသည့် ထူးခြားသောသတင်းအကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုစုံလင်စွာဖော်ပြသောဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ Popular Myanmar သည် ကိုယ်ပိုင် သတင်းရေးသားသူများ၊ မူရင်းရေးသားသည့် ဆိုဒ်များ( Daily Mail, Myanmar CNN, The Straits Times) ကိုလည်း credit ပေးသဖြင့် သတင်းရင်းမြစ်သည် ယုံကြည်ရသည်။ ယနေ့ ဖြစ်ပေါ်နေသော မြန်မာသတင်းများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ပြနိုင်သဖြင့် ဝင်ရောက်စာဖတ်သူများသောဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Popular Myanmar is an easy-to-load Myanmar news website. Popular Myanmar gives information of each news under distinctive category with different colours. Popular Myanmar reports today’s local and global news headlines, film news, crimes, sports and other several articles.
Depending on Popular Myanmar’s audiences’ interest, Popular Myanmar provides contents like the pros and cons of using Internet at this age, etc. Apart from providing its own written contents, Popular Myanmar gives proper credits to the sources like Daily Mail, Myanmar CNN, and The Straits Times while sharing their contents. Popular Myanmar provides reliable information and is up-to-the-minute Myanmar news.
Previous articleYgn News (www.ygnnews.com)
Next articleThe Transport News (http://www.thetransportnews.com/)